Apple TV + Ayaa Helay Magacaabista Abaal Marinta Sadex Saturn | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii aan bilownay 2021, inbadan waxay ahaayeen magacaabis uu helay Ted Lasso, taxane ah, oo hada, horeyba ugu guuleystey mid kamid ah, gaar ahaan Golden Globe ee jilaa ugu wanaagsan majaajillada, door uu ciyaaray Jason Sudeikis. Nasiib wanaag Apple, tan ma aha taxanaha guusha kaliya, inkasta oo ay ka mid tahay abaalmarinta ugu muhiimsan.
Apple TV + wuxuu helay seddex magacaabid cusub oo Saturn Award ah, abaalmarino ay bixiso Akadeemiyada Cilmiga sayniska, Fantasy iyo Filimada naxdinta leh, abaalmarino taariikhdeedu ahayd ilaa 1971 iyo halka ay ku tartamaan taxanaha telefishanka iyo filimaduba. Taxanaha loo magacaabay daabacaadda sanadkan ee Abaalmarinta Saturn waa: Aadmiga oo dhan, adeegaya y Qisooyin yaab leh.
3 Qisooyin yaab leh
Taxanaha Dhamaan Aadanaha waxaa loo magacaabay qeybta Taxanaha Telefishanka Fantastic Fiican lana tartami doona Outlander, Aagga fiidka ah, Crystal Dark: Da'da iska caabinta, Locke & Key, Sixiroolayaal y Witcher.
Taxanaha adeegaha waxaa loo magacaabay qeybta Taxanaha ugu xun TV wajihi doonana Dead Socodka The, Creepshow, Xun, Lovecraft country, Ka cabso Dhimashada Socodka y Waxa aan ku qabanno hooska.
Qisooyin yaab leh
Dib-u-kicinta taxanaha 'Steven Spielberg', oo dhadhan qadhaadh ku reebay kuwa raacsan silsiladdan sheekooyinka ah ee 80-maadkii, ayaa lagu magacaabay qaybta. Soo Bandhigida Telefishanka Ugu Fiican (in ka yar 10 qaybood) waana la tartami doonaa Mandalorian, Perry Mason, Dracula, Habaarka Bly Manor y Arrin mugdi ah.
Liiska sanadkan la magacaabay wuxuu ka kooban yahay 286 magacaabid oo ka badan 40 qaybood. Filimaanta ama taxanaha telefishanka ee doortey magacaabistaan ​​waa iney soo baxaan inta udhaxeysa Julaay 15, 2019 iyo Nofeembar 15, 2020, oo ah waqti aad u balaaran oo balaaran maadama cudurka coronavirus uu faafo. Gudaha liiskan Waxaad ka hubin kartaa inta kale ee la magacaabay dhammaan qaybaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple TV + wuxuu helaa seddex magacaabid abaalmarinta Saturn
Visual Studio-ka Microsoft wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple Silicon